स्रष्टा सङ्गमद्वारा आदि पत्रकार गङ्गाप्रसाद प्रधानको स्मरणमा ऱ्याली अनि सलोन कार्थकलाई सम्बर्द्धना - खबरम्यागजिन
Homeखबरखरसाङस्रष्टा सङ्गमद्वारा आदि पत्रकार गङ्गाप्रसाद प्रधानको स्मरणमा ऱ्याली अनि सलोन कार्थकलाई सम्बर्द्धना
January 13, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खरसाङ, मुख्य समाचार 0
खरसाङ, 13 जनवरी।
इशाई लेखकहरूद्वारा गठित स्रष्टा सङ्गमले आदि पत्रकार पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको स्मरणमा ऱ्याली अनि सम्बर्द्धना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। स्रष्टा सङ्गमद्वारा सिक्किमको रम्फूमा आयोजित दुई दिवसीय साहित्यिक भेटघाट कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो दिन आदि पत्रकार पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको स्मरणमा ऱ्यालीको आयोजना गरियो। उक्त ऱ्याली यहाँको ईपी भवनबाट शुरू भई रम्फू बजार परिक्रमा गरी ईपी भवनमै आएर समापन गरियो। यस ऱ्यालीमा रम्फू र सिक्किम क्षेत्रका स्रष्टाहरूलगायत दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, सिलगढी, डुवर्स क्षेत्रका स्रष्टाहरू पनि उपस्थित थिए। ऱ्यालीपछि यहाँको ईपी भवनमा पादरीको स्मरणमा नै कार्यक्रम शुरू गरियो जसलाई पास्टर कालेप गजमेरको प्रार्थना अनि एल्डर पत्रुस गुरुङले स्वागत वक्तव्य राखेका थिए।
यसै कार्यक्रममा पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको जीवनी र तिनको योगदानमाथि पहिलोपल्ट पुस्तक लेख्ने स्रष्टा भारतीय नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान रहेका सलोन कार्थकलाई स्रष्टा सङ्गमको पक्षमा सम्बर्द्धना पनि गरियो। यस अवसरमा उनलाई मुख्य अतिथि डा एडोन रोङ्गोङ, विशिष्ट अतिथिद्वय डा. बीडी राई, डा. छत्र सुब्बा पावल र सभापति क्यामुना प्रधानको बाहुलीबाट खदार्पण अनि शल ओढ़ाएपछि सम्बर्द्धना पत्र प्रदान गरियो। सम्बर्द्धना पत्र कथाकार सन्ध्या आचार्यले पठन गरिन् भने स्रष्टा सलोन कार्थकको जीवनी स्रष्टा सङ्गमका सचिव हनोक थापाले राखेका थिए।
कार्यक्रममा पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको योगदानमाथि र सन् 1901 देखि 1932 सम्म लगातार रूपमा प्रकाशित गोर्खे खबर कागतको विषयमा स्रष्टा सलोन कार्थकले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। उनले गोर्खा जातिको अस्तित्व र पहिचानमाथि अघिबाट नै पादरीले सोचेर चेतना दिने कार्य गरेको बताउँदै पादरी निष्ठावान् पत्रकार, सम्पादक, पाठ्य पुस्तक लेखक, बिज्ञापनदाता, प्रकाशक, संवाददाता रहेको बताए। पत्रकारिता विषयको पढ़ाईमा गोर्खे खबर कागतलाई पनि विषय सूचीमा राख्न सकिने पनि उनले बताए। कार्थकले गोर्खे खबर कागतमा त्यसताक प्रकाशित समाचारहरूका उदाहरणसहित बताए।
कार्यक्रममा पादरीद्वारा लिखित गीत प्रस्तुत गरियो भने तिनको जीवनीमाथि लेखिएको गीतमा आसना र भीमले नृत्य पनि प्रस्तुत गरे। गायिका प्रिसकिला सुनुवार र नानीहरूले गीत पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि डा. एडोन रोङ्गोङले पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधान जातिलाई माया गर्ने र शिक्षाको माध्यमबाट जातिको उत्थान गर्न चाहने व्यक्ति थिए भनी बताए। उनले पादरी गङ्गाप्रसाद जातिको लागि नमूना बनेका छन् भन्दै वरिष्ठ स्रष्टाहरूद्वारा लिखित भनाईहरू पनि बताउँदै पादरी दार्जीलिङ पहाड़को अग्रगामी भाषा सेवक हुन् भनी बताए। कार्यक्रमलाई हनोक थापाले सञ्चालन गरेका थिए भने धन्यबाद ज्ञापन इम्मानुएल गिफ्टले राखेका थिए।
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,208)